Lionel Messi Oo Ka Hadlay Arin Hadal Hayay Oo Ku Aadan Bixitaankiisa Barcelona
HomeWararka CiyaarahaLionel Messi oo ka hadlay Arin hadal hayay oo ku aadan bixitaankiisa Barcelona
November 1, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Lionel Messi ayaa ku weeraray Joan Laporta hadaladii uu ka yiri ka tagistii Barcelona .
34-sano jirkaan ayaa ka tagay Camp Nou kuna biiray Paris Saint-Germain xagaagii hore ka dib markii uu dhacay qandaraaskiisa, iyadoo kooxda reer Catalonia aysan awoodin inay heshiis cusub ka saxiixdo dhibaatooyin dhaqaale.
Madaxweynaha Barcelona Laporta ayaa bishii hore sheegay in uu ku rajo weyn yahay in uu Messi ku qanciyo in uu kooxda ugu ciyaaro lacag la’aan laakiin waxa uu aqbalay in ay tahay wax aan macquul ahayn in la waydiiyo.
Messi ayaa sheegay in uu sameeyay wax walba oo uu ku sii joogi karo kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga waxana uu hadalka Laporta ku tilmaamay mid aan haboonayn.
“Waxaan sameeyay wax walba oo aan awoodi karo si aan u sii joogo,” Messi ayaa u sheegay Sport . “Marna la igama waydiin inaan si bilaash ah ugu ciyaaro,waxa la i waydiistay in aan dhimo mushaharkayga 50%,waana ogolaaday taas dhib la’aan,waxa aanu diyaar u ahayn in aanu kooxda caawiyo.
“Rabitaankayga iyo rabitaanka qoyskeyga ayaa ahaa inaan sii joogo Barcelona, ​​qofna ima weydiisan inaan u ciyaaro si bilaash ah, laakiin isla waqtigaas, waxaan u maleynayaa in waxa uu madaxweynuhu yiri ay tahay mid aan habooneyn.
“Taasi way i dhaawacday sababtoo ah uma maleynayo inuu u baahan nahay inuu sidaas sheego. Taasi waxay abuurtaa mala-awaal ama waxay dadka ka dhigtaa waxyaabo aanan u maleyneynin inaan u qalmo.”
Messi, oo PSG kula jira heshiis dhacaya June 2023, ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ku laabto Barcelona marxalad ka mid ah mustaqbalka.